Suarez oo hilmaamay Passport-kiisa - CIYAARO.COM
Home / Champion's League / Suarez oo hilmaamay Passport-kiisa	Suarez oo hilmaamay Passport-kiisa
By Gamadiid Guurre	Updated: February 22, 2016	Tweet
Barcelona ayaa cagadhigatay London halkaasoo ay kula ciyaari doonaa habeen dambe Arsenal wareega 16ka Champions League. Laakiin arrinta lama filaanka ah ee dhacday waxey aheyd in gooldhaliyaha ugu sareeya xilligaan Europe, Luis Suárez, uu ku sigtay inuu seego duulimaadkiisa.
Markii Barca ay isku diyaarsay in ay diyaaradda raacaan ayaa Luis Suárez ogaaday inuusan wadan passport-kiisii oo uu kaga soo tagay aqalkiisa. Taasi waxey sababtay in kooxdu ay taxi u dirto gurigiisa si loo soo qaado Pass-ka isla markaana dib loo dhigay duulimaadka.
Sugitaan kadib, xiddiga reer Uruguay waxaa loo keenay Pass-kiisii isagoo horey u sii watay safarkiisii
Related posts:Champions League Lyon Vs SchalkeBayern oo guul ka gaartay Villarreal furitaanka Champions Barcelona oo dirqi kaga badisay CelticShare/Bookmark	Luis Suareznew